Baarlamaanka Australia oo tallaabo ka qaaday xildhibaan u qiil sameeyay weerarkii masaajidka New Zealand | Biyoguurenews.com
Home Wararka Baarlamaanka Australia oo tallaabo ka qaaday xildhibaan u qiil sameeyay weerarkii masaajidka...
Baarlamaanka Australia oo tallaabo ka qaaday xildhibaan u qiil sameeyay weerarkii masaajidka New Zealand
Mudaneyaasha aqalka Senate-ka ee dalka Australia ayaa si rasmi ah kalsoonida ugala noqday xildhibaan caro badan abuuray oo weerarkii masaajidka New Zealand u sababeeyay muslimiinta soo galootiga ah.
Fraser Anning, oo ah Senator madax bannaan oo ay siyaasaddiisu u janjeerto midigta-fog ayaa hadalkiisa shacabka ka carysiiyay jeediyay maalintii uu dhacay weerarkii masaajidyada Christchurch ee bishii lasoo dhaafay lagu dilay 50-ka ruux.
Maanta oo Arbaco ah ayey xildhibaannada kasoo kala jeeda guud ahaan garabyada siyaasadeed ee kala duwan ku eedeeyeen inuu jeediyay “hadal qallafsan oo abuuraya kala qeybsanaan”.
Mr Anning ayaa sheegay in go’aanka kalsoonida lagala noqday uu yahay “weerar ka dhan ah xorriyadda hadalka”.
Tallaabadan, oo ah tii shanaad ee nooceeda ah oo xidhibaan laga qaado muddo 10 sano ah gudaheed ayaa muujineysa in fikirka senator-ka uusan taageero ka heysanin baarlamaanka iyo shacabka dalka Australia toona.
Siyaasigan ayaa hadalka uu yidhi waxa uu ahaa: “Sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dhiigga maanta lagu daadiyay waddooyinka New Zealand waa qulqulka soo galootiga muslimiinta xagjirka ah ee bartilmaameedkooda ugu horreeya ka dhigta New Zealand”.
Hadalkiisu wuxuu ahaa mid “ceeb ah” oo “laga argagaxo”, ayey dhaheen xildhibaanno kale oo ka tirsan aqalka Senate-ka.
Warqadda lagu shaaciyay kalsooni kala noqoshada Mr Anning ayaa lagu yidhi: “Wuxuu eedeyn u jeediyay dadkii lagu laayay faldambiyeedkii naxdinta lahaa wuxuuna muujiyay nacayb ka dhan ah diinta”.
Hal xildhibaan oo kaliya ayaa ka soo horjeestay mooshinka ka dhanka ahaa siyaasigan halka saddex xildhibaan oo uu ku jiro Mr Anning qudhiisa ay ka aamuseen.
Inkastoo tallaabadan aysan ficil ahaan u dhaqan galeynin, kalsooni kala noqoshada ayaa ahayd cambaareyn rasmi ah oo loo jeedinayay xildhibaankaas.
Khubarada dhinaca dastuurka ayaa sheegay in xildhibaan aan laga eryi karin baarlamaanka ilaa in lagu helo dambiyo ka dhan ah dastuurka, sida in uu heysto labo dhalasho oo dalal kala duwan ah, inuu musuqmaasuq ku kaco, inuu xafiisyo kale si qarsoodi ah uga shaqeeyo ama in dambiyo kale lagu helo.
Mr Anning ayaa baarlamaanka Australia ku biiray sannadkii 2017-kii, isagoo xilligaas baddalay Senator kale oo ay caddaatay in uusan xilka u qalmin.
Waxaa siyaasigan horay loogu eedeeyay ficillo kale oo uu ku muujiyay cunsuriyad iyo nacaybka soo galootiga muslimiinta ah.
Dad ka badan 1.4 malyan oo ruux ayaa saxiixay mooshin lagu dalbanayay in Mr Anning uu xilka iska casilo, ka dib hadalkii uu ka yidhi weerarkii dhacay 15-kii bishii Maarso.
Ra’iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa mar hadalkiisa ku tilmaantay “erayo aan wax kasoo qaad lahayn”.
Dhacdo kale oo aad loogu faafiyay baraha buslahada, caalamkana wada gaartay, waxay ahayd markii uu wiil dhalinyaro ah ukun madaxa uga jabiyay siyaasigan oo shir jaraa’id ka hadlayay.
Mr Anning ayaa marar badan difaacay hadalkiisa.
Previous articleRaysal Wasaaraha Itoobiya Oo Jigjiga Gaadhay Iyo Ujeedada Socdaalkiisa
Next articleNin asagoo 6 jir ah qoyskooda dhul laga dhacay oo inta garyaqaan noqday dhulkii usoo dhiciyey
Joe Biden: Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka
Raggii dilay Khashoggi oo la ogaaday in lagu tababaray Mareykanka
Hadal-haynta Naada Al Qalcah: Fannaanada reer Suudaan iyo Soomaalida
Joe Biden: Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo...
Siyaasi Cali Guray oo ka hadlay Khilaafka F.C.Waraabe & Wiilkiisa C/naasir...
Dagaal Culus oo ka Socda Gobolka Tigray iyo Magaalooyin istraatiiji ah...
Liibiya: Qasrigii duulayay ee Qadaafi oo dib loo soo celiyay
Militariga Lubnaan oo raashiin iyo saanad looga yaboohayo caalamka
BERBERA Gudoomiyaha Kaluumaystada berbera oo kahdlay dhibatooyin haysta xiliyada xagaaga
Maxay Oromada weli faquuq u dareemayaan xitaa haddii wiilkoodii R/wasare laga...